IMEX America: Raha te hanana normal vaovao isika dia tsy maintsy mamorona azy io isika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » IMEX America: Raha te hanana normal vaovao isika dia tsy maintsy mamorona azy io isika
Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ireo mpikabary avy amin'ny aerospace, kanto, famolavolana ary teknolojia hetsika dia mizaha zava-baovao fatratra amin'ny Andron'ny IMEX Buzz Jolay.
Ny fiaraha-miasa sy ny fanavaozana no teny fiambenana ny Fetin'ny Buzz an'ny IMEX amin'ity volana Jolay ity.
Ity dia tolak'andro fampianarana maimaimpoana amin'ny sehatra virtoaly vaovao an'ny orinasa, IMEX BuzzHub.
Eo ambanin'ny sora-baventy Fanavaozana Extreme - Inona izany ary maninona no maninona? ireo manampahaizana avy amin'ny Airbus, Smyle, ny GCB ary ireo masoivohon'ny famoronana dia hanazava ny fomba nanosihany fetra hanomezana fiovana ary hamorona lanja vaovao ho an'ny orinasany.
Ary koa - ao anaty indostria aloha - ny vondrona IMEX dia miara-miasa amin'ny Swapcard hanaterana ireo fotoam-pivoriana. Mpanatrika ny hetsika Evolve Homecoming any Swapcard: ny Big Industry Comeback sy ny Buzz Day an'ny IMEX dia afaka miditra ao anaty atiny miaraka amina teny ifotoran'i Arianna Huffington.
Ny foko hetsika roa tonta dia asaina hiaraka amin'ny fanakatonana ny hetsika ao amin'ny Gather Buzz Fest izay tanterahina amin'ny sehatra virtoaly Gather.Town. Ity nodimandry notarihin'i avatar tamin'ny lalao video 80 ity dia nahagaga tokoa nandritra ny andrana IMEX tamin'ny volana lasa teo.
Fanavaozana goavana - manomboka amin'ny Airbus
Ny mpitarika ny laboratoara fanavaozana Airbus dia mandefa ny Andron'ny Buzz amin'ny 7 Jolay. Christophe Debard dia mpitarika ny ProtoSpace Toulouse, laboratoara natokana ho an'ny fanavaozana ao Airbus. Izy koa dia nanangana ny Airbus 'Humanity Lab - hetsika iray ahafahan'ny mpiasan'ny Airbus mandray anjara amin'ny tetikasa izay misy fiatraikany mivantana amin'ireo faritra misy ny fahasembanana, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny tontolo iainana. Ny programa dia noforonina avy amin'ny zavatra niainan'i Christophe manokana momba ny fahasembanana.
Christophe Debard, Lehiben'ny ProtoSpace Toulouse - Airbus
Ny fahaizana am-pahaizana sy fiaraha-miasa hitondra ny zava-baovao dia lohahevitra mandeha mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra tontolo andro. Robert Dunsmore, izay mitarika ny iray amin'ireo fivoriana, dia nanazava hoe: “Mahereza. Raha te hanana normal vaovao isika dia tsy maintsy mamorona azy io! " Ny mpanolotsaina mpamorona Robert dia niara-niasa tamin'i Frankie Boyle, mpanakanto an-tsary any UK izay manana traikefa efa ho folo taona eo amin'ny sehatry ny kanto, fialamboly ary hetsika. Manam-pahaizana manokana i Frankie amin'ny fampiasana hazavana amin'ny fitantarana ary hamoronana traikefa mahatsapa: 'Ny mazava dia fiteny', hoy izy. Frankie dia hizara ny fikarohana ataony momba ny maha-zava-dehibe ny fahazavana amin'ny fahasalamana, ny anjara asany ao anatin'ny fizotran'ny kognitika, ny fahasalamana ara-tsaina ary ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana andavanandro.
Frankie Boyle, mpanorina - talen'ny famoronana ao amin'ny Febo Designs Ltd.
Ny GCB dia hanome ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny maha mpamorona ny 'efitrano fandraisam-bahiny' vaovao. Ity sehatra vaovao misokatra ity dia mamporisika ireo mpandamina fihaonana, mpikarakara, mpamatsy ary mpandray anjara amin'ny hetsika manangona sy hamorona modely, vokatra na serivisy vaovao.
'Inona no ho azonao amin'ity krizy ity?' manontany an'i Matt Margetson, talen'ny mpanorina sy fanavaozana ao Smyle, tao amin'ny fotoam-pivoriany. Hodinihiny ny fomba nitadiavan'ny marika toro-hevitra avy amin'ny indostrian'ny famoronana mba hitazomana sy hifandraisana amin'ireo mpihaino azy amin'ny fomba mahasarika kokoa hatrany. Rehefa nanamboatra haingana ny orinasa hanao mpisava lalana virtoaly i Matt, dia nitarika ny ekipany nitady ny eritreritra farany sy ny haitao farany.
Indostria aloha - Mivory ireo foko IMEX sy Evolve
Amin'ny voalohany ho an'ny indostria, ny vondrona IMEX dia miara-miasa amin'ny Swapcard handefasana atiny miaraka. Ireo mpandray anjara amin'ny Buzz Day sy ny fodian'i Evolve's Homecoming dia afaka miditra amin'ny fivoriana crossover manokana momba ny fomba fananganana kolotsaina fanavaozana.
Cris Beswick, mpanolotsaina stratejika, izay hitory ny fivoriana dia manazava hoe: "Ny filana fitarihana tarihin-tanjona sy famoronana ary ny fananganana kolontsaina misy fanavaozana dia tsy mbola ambony noho ny fandaharam-potoana stratejika." Nekena eran-tany ho mpitarika eritreritra momba ny paikady fanavaozana, ny fitarihana ary ny kolontsaina, i Cris dia nanampy ny tale jeneraly, mpitarika, orinasa ary governemanta manamboninahitra indrindra eran'izao tontolo izao hamaha ireo fanamby manahirana indrindra ataon'izy ireo. Hifantoka amin'ity traikefa ity izy ary hizara ny sasany amin'ireo torohevitra ao amin'ny boky lafo indrindra "Build a Culture of Innovation."
Avy eo ny tohanan'ny hetsika dia mitohy miaraka amin'ny fahafahan'ny Buzz Day sy ny vondrom-piarahamonina Evolve Swapcard hiara-hipetraka amin'ny Gather.Town mandritra ny Gather Buzz Fest. Nofaritan'ny mpandray anjara iray ho toy ny “fahatsapana fa toa nitsambikina tao amin'ny efijeran'ny solo-sainao misy efitrano feno olona nanao toy izany ianao,” Gather.Town dia manambatra avatar tsotra miaraka amina lalao video 80 mba hamoronana tontolo nomerika mahafinaritra, haingana sy sariaka.
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava hoe: "Ny fanavaozana no hany fomba ahafahana mamorona fanovana misy dikany sy manorina mandroso tsara kokoa. Ao amin'ny IMEX dia miezaka hatrany izahay manosika ny fetra famoronana sy hanao fanandramana amin'ny anaran'ny indostria. Ny famelana ny "BuzzHubbers" topy maso amin'ny vondrom-piarahamonina Evolve sy ny fotoana mety hiarahana - saika - ao amin'ny Gather Buzz Fest on Gather.Town dia fanandramana tsapanay fa samy hanome lanja sy hankasitraka ny foko roa tonta. Faly izahay fa mitarika an'io toe-tsaina fiaraha-miasa io fa tsy fifaninanana. ”
Julien Bouvier, Talen'ny Evolve Events ary tetikady tetikady ao amin'ny Swapcard, dia nanampy hoe: "Samy nanolotra atiny isam-bolana ho an'ny mpijery nomerika ny IMEX sy ny Swapcard ary ny hevitra hizara atiny dia tonga tamin'ny ekipa roa tonta tamin'ny aingam-panahy! Ny vondrom-piarahamonina Evolve sy BuzzHub dia samy ohatra voalohany amin'ny mpikarakara hetsika mifindra amin'ny maodely fifamofoana 365 andro. Tsy vitan'ny fampitomboana ny fivezivezena ananan'ny mpihaino manerantany fa ny vondrom-piarahamonina dia manome toerana hizarana fahalalana azo antoka sy mangarahara eo amin'ny marika sy ny mpanjifa. ”
Ny IMEX Fetin'ny buzz dia atao amin'ny 7 Jolay ary ny fisoratana anarana dia maimaim-poana. Ny tontolo andro feno fianarana dia miara-miorina amin'ny Mivoatra mody: miverina ny indostria lehibe.
Ny IMEX BuzzHub dia mihazakazaka hatramin'ny volana septambra izay manolotra fifandraisana misy eo amin'ny samy olombelona, ​​lanja momba ny asa aman-draharaha ary atiny voafaritra ao amin'ny 'Road to Mandalay Bay' Amerika IMEX, 9-11 Novambra, ary Alatsinainy Smart, ampandehanin'ny MPI amin'ny 8 Novambra.